सीके राउतविरुद्ध कांग्रेसले ल्यायो डरलाग्दो प्रस्ताव, ओली समेत तर्सिए ! – Rastriyapatrika
सीके राउतविरुद्ध कांग्रेसले ल्यायो डरलाग्दो प्रस्ताव, ओली समेत तर्सिए !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विखण्डनकारी चरित्रका नागरिकको नागरिकता खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो प्रस्तावले राष्ट्रवादी भनिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि चकित परेको छ। उपचाररत प्रधानमन्त्री ओली पनि यो प्रस्ताव ल्याउन सकिरहेका थिएनन।तर कांग्रेसले अघि सारेर उनलाई समेत सरपराइज्ड गरेको छ। यो प्रस्तावले विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेका सीके राउतको समेत सातो गएको छ।